Ụbọchị My Pet » The 5 Big dịwara Mejọọ ahụ Women Mee
The 5 Big dịwara Mejọọ ahụ Women Mee
emelitere ikpeazụ: Jan. 21 2021 | 5 min agụ
Ị na a ọjọọ oge na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị?
Ị na o yie ka on ọtụtụ ụbọchị na ịgwa nza nke ndị ikom online ma ị dịghị iyi iji mee njikọ ma ọ bụ izute nwoke gị?
Ọ bụrụ otú ahụ ọ bụ eleghị anya ị na-eme otu onye ma ọ bụ karịa nke '5 Big dịwara Mejọọ'. Ebe a na- 5 Big dịwara Mejọọ na ndị inyom na-eme, na ihe na-eme kama.
1. Approach dịwara na Agenda
N'ihi ya, ọtụtụ ndị m inyom ahịa obibia akpa na obula na ya n'ezie na-arụ ọrụ megide ha na ihe ịga nke ọma na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Ha na-achọ ha nwoke, ọ bụrụ na ha na-adịghị ahụ ya ozugbo na ihe ọ bụla nke ndị ikom kpọtụrụ ha nwoke ego n'anya asuan ozugbo na e dere anya na-enweghị ohere nke ọzọ ụbọchị inyocha njikọ (ma ọ bụ na-enweghị ya) n'ihu. Na ọ bụrụ na ha na-eme ga-esi na ụbọchị ogbo, nwaanyị na-eburu na burukwa ha ụbọchị dị ka nke ọma ihe na-erughị afọ ojuju results.
O nwere ike iyi counterintuitive ikwu gaghị enwe ihe obula mgbe akpa, mgbe niile n'ezie dum ihe mere anyị na-akpa bụ izute 'nwoke gị' nri? Ọfọn ee, na ọ dịghị. Mee elu mee ala na ogologo oge nke a bụ ọchịchọ, Otú ọ dị ị ukwu belata gị inweta na ogbo ma ọ bụrụ na ị na-agakwuru akpa na burukwa. Mgbe a na ogbo ke egwuregwu ọ ka nnọọ mma ele mkpakọrịta nwoke na nwaanyị n'ihi ihe ọ bụ - a ohere na-ezukọ na-abụ na ndị na-abụghị mmekọahụ n'ihi na kọfị, na-ejegharị, akparị ụka na na. Bịa na ndị - Ọ bụ naanị A ỤBỌCHỊ - bụghị a agbamakwụkwọ N'ajụjụ ọnụ, ya mere, ka si zuo a ntakịrị ma na-emeso ya dị ka ndị dị otú ahụ. Ọ bụ ihe dị otú ahụ ezi uche Echiche na-atụ anya na i nwere ike mara ma onye bụ ndụ gị na onye òtù ọlụlụ site na otu nzukọ na keakamere ọnọdụ.
Ọ bụrụ na ị maara m obibia akpa n'ihi na ndị inyom ị ga maara na m nwere ike ikwu akpa dị ka ọgwụ n'ihi na n'imezi ihe ọjọọ mmekọrịta ihe nakawa etu esi. Otú ọ dị ihe karịrị nke a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-ịbụ fun na ìhè hearted. Ọ bụrụ na ị na-aga na burukwa ịchọta ma ọ bụrụ na nke a bụ nwoke gị ọ na-eme a ton nke nsogbu na ọnọdụ ahụ dum, na na pụtara na ma unu ma gị ụbọchị ga-enwe ike iji zuru ike ma na-enwe ahụmahụ. Ị ga-enwe ike ịdị gị mma onwe dịghịkwa ọ ga-. Ya mere idebe burukwa na-eme ka onye ọhụrụ - ka ọhụrụ, na na na ìhè-hearted ahụmahụ ndị na-ọhụrụ ndị mmadụ.
2. Ịchị mmadụ kwa ngwa ngwa
Dị ka na-akpa nnukwu ndudue, ndudue 2 bụ ụzọ ọzọ na ndị inyom gbaa onwe ha na ụkwụ mgbe akpa. Ọtụtụ n'ebe ọdịda anyanwụ inyom na ọha mmadụ nke taa na-achị site 'onwu' ha na-eche mgbe ọ na-abịa na-eme ha nhọrọ na ndị ikom, m na-ahụ nke a ga-esi ha n'ime ụdị nile nke nsogbu oge na oge ọzọ. Chemistry nēche na-a ogbenye egosi ma a nwoke ga-abụ ezigbo onye gị. N'ezie ufiop onwu bụ mgbe a ịdọ aka ná ntị mgbaàmà maka ụmụ nwanyị ndị na-adịghị mere oké mmekọrịta nhọrọ na n'oge gara aga. Ọtụtụ mgbe, ndị ezi mmadụ nwere ike ina kpamkpam anya n'ihi na ha bụ ụjọ na ihere na mbụ ụbọchị ha na-anaghị abịa a ntụmadị na onwu ngalaba. N'ihi na ndị inyom mma nwere ike na-eto eto ka oge na-na a ezi mmadụ. Ya mere inye ndị na-ihere ma ọ bụ nwoke dị nwayọọ, ohere ọzọ, N'eziokwu-enye ya ọtụtụ obere ụbọchị na-ahụ ma ọ bụrụ na ọ na-adịghị pụta nke ya shei n'ihi na ị na-atụgharị ihe mara mma nwoke, ikekwe ọbụna 'nwoke gị'. Echegbula onwe gị banyere ma ị nwere ike iche na ugbu a (ịhụ ndudue 1).
3. Bịakwute Ụbọchị Na A ed
Hiere 3 yiri elewe 1 na dị nnọọ ka emebi, ma ọ bụrụ na ọ bụghị njọ. Amaara m na ọtụtụ ndị inyom nwere trusty 'checklist' nke àgwà na ha chọrọ (ma ọ bụ na-eche na ha chọrọ) na a nwoke. Ọ dịghị ihe na-ezighị ezi na-echefu doro anya na ihe ị chọrọ gị ezigbo onye ladies, Otú ọ dị, ka-esi n'ime eziokwu na anyị na anatara n'ihi na ụfọdụ n'ime ha bụ ndị zuru efu ma na-adịghị na-eje ozi na ị na niile!
Ndepụta bụ mgbe nnọọ ogologo ma na-emekarị na o nwere ihe na e nwere na n'ezie na-akwadoghị onwe ha! Ka ihe atụ o nwere ike 'nwayọọ na tọrọ azụ' nri na-esote 'omiiko na energetic'. Ugbu a, m na-ekwu na i nwere ike na-enweghị ndị niile àgwà otu onye, Ọ bụ nanị na-ejikarị otu nwoke nēche kwupụta otu nke ọzọ. Ya mere nke bụ na ọ? Ọzọkwa anyị anatara mgbe ụfọdụ nwere ihe ndị na na na-na-adịchaghị mkpa, dị ka 'tattoos' ma ọ bụ 'uru'. Bịa na ladies! E nwere ihe ọjọọ ọ bụla na-enwe ahụ mmasị ma na-n'ezie na ị na-aga na-ahọrọ ndụ gị na onye òtù ọlụlụ ma o nwere ink na ozu ya? Ì chere na nke a ga-ewetara gị ihe kasị mma ná mma maka ndụ gị? Gịnị banyere àgwà na n'ezie okwu, dị ka ikwu eziokwu, iguzosi ike n'ihe, mfọnido, ike (nke uche) were gabazie?
Ka nwaanyị ọ bụla nwere ike ikpebi ihe dị mkpa na-ya. Otú ọ dị oge na oge ọzọ m hụrụ ndepụta tụba mgbe a nwaanyị akpatre osobo ya ndụ ibe, na ọ na-abụkarị kpamkpam dị iche iche nke nwoke o nwere on ya ndepụta! Na obi dị ya ụtọ. Ya mere, m ndụmọdụ - itu si ndepụta! Ma ọ bụ, ma ọ bụrụ na ị ga-enwe ya, -egbutu ya ka a kacha nke dị na 5 kasị mkpa àgwà. Jiri ya dị ka a n'ozuzu ndu BỤGHỊ a checklist.
4. Gbalịa Oke Ike
Ya mere, ị akpatre zutere onye na-amasị gị, ị na-esi na a ụbọchị na ya na ị na-eche ụjọ. Ya mere, ihe ị na-eme? Ị na-ekwu. Ọ bụrụ na e a ọdịiche ná mkparịta ụka ị na-ju ya. Ị na-atụ aro ebe gaa ọzọ, ị dazzle ya ifo nke ahụmahụ i nwere, na-egosi ya gị sachaa ama ma na ị nwere ya na stitches karịrị gị ọchị. Na N'ezie ị na-enye iji kwụọ ụgwọ maka gị ọkara nke ụbọchị, ma ọ bụ ikekwe ọbụna gị inwe ahụ dum ụgwọ - na ị bụ oge a na nwaanyị mgbe niile. Ma ọ na-aga AKWA! Ọ na-achị ọchị na ị, na e nwere njikọ, i nwere ike na-eche na ọ. Ma, mgbe ahụ, ọ dịghị mgbe na-akpọ. Ọ na-aga oyi na kpamkpam mgbe a di na nwunye nke ụbọchị. Ya mere, ihe wee na-ezighị ezi?
Ọfọn ọtụtụ ndị ikom na-ahọrọ na-na ndị ikom na ọrụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe niile ma ọ bụ ihe ọ bụla nke dị n'elu na ị na-n'ezie pushing ya nke ọrụ a, pụtara na ị na-egbochi ya ịghọ n'ụzọ mmetụta uche nyekwara ke ị. Ndị nwoke mma na nkwa mmetụta uche na-tripped mgbe ha na-etinye na ụfọdụ mgbalị. I nwere ike iche na ị na-ịbụ maa mma ma na-adọrọ Otú ọ dị ya na-agaghị enweta gị n'ebe dị anya ke ogologo okwu na ọtụtụ ndị ikom. O nwere ike na-enweta oge na gị, o nwere ike na-achị ọchị na gị na e nwere ike ọbụna ịbụ nke abụọ ụbọchị, Otú ọ dị o yiri ka ejedebe ayak onye ọzọ - ọzọ 'ike' nwaanyị na onye ọ na-etinye na mgbalị.
O kwesịrị ịbụ onye na-eduga na mkparịta ụka, n'ịnọgide na-gị na-atụ aro na ebe mgbakọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpalite ya miri obi ya na-edu na-ike iji na-eso. Izu Ike na-eme ịbụ ugbu a na ụtọ ahụmahụ kama.
5. Bụrụ ihe Ice Mbụ
Ịbụ onye ice nwa agbọghọ bụ tụgharịa akụkụ-agbalị siri oke ike. Ụfọdụ ndị inyom mara banyere ndudue nọmba 4 ha wee were ya na nke ọzọ gabigara ókè ma na-kwa aloof na dịghịzi adị. Ọ bụ ezie na ha nwere ike na-aga n'ihi na 'ike iji nweta' na 'elu uru', ma ọ bụrụ na e tere a pụrụ abịa anya na ị na-mmasị, dịghịzi adị, -enweghị omume enyi na ọbụna snobby. Ọ nwere ike na-eche a bit oyi ka ọtụtụ ndị ikom, na ọtụtụ ndị ikom ga-enye mma ngwa ngwa na ice nwa agbọghọ, ma e wezụga ndị bụ ndị dị nnọọ mmasị na ihe ịma aka nke chụrụ, na ị na-achọghị nke a na ụdị mmadụ dị ka o nwere nnọọ ike dobe gị ozugbo chụrụ bụ ihe na-akpali on nwanyị ọzọ.
E kwesịrị inwe nguzozi n'agbata a na-tọrọ azụ / ime ka ya na-edu ma ka na-mmasị na-emeghe. Ọ bụrụ na i nwere ike inwe a itule nri ị ga-enwe a oké oge na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Ndị isi ihe na-echeta na-dị nnọọ bụrụ onwe gị. Esi n'ezie ike n'ime onwe gị ma na-ala na gị onwe gị akpụkpọ. Mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nwere ike n'ezie inyere gị aka na!
Ya mere, gaa pụọ ​​n'ebe na n'elu ihe nile adịghị akpa oke n'onwe. Gị mgbe ihe na-aga ka onye nke ọzọ. Emeso ya dị ka fun 'omume' ọ ga-arụ ọrụ gị.